Ababhalisile be-YouTube bamahhala | Thenga ababhalisile be-YouTube
Izinkonzo Zethu Eziphambili
Thenga Ukuhlolwa kwesiteshi se-YouTube
Thenga i-YouTube Video Video
Thenga i-YouTube Graphic Design
Thenga ukusebenzisa i-YouTube
Ama-oda wami adlule
Isevisi engu-#1 yokukhulisa isiteshi sakho se-YouTube Ngabantu Bangempela, Ngokushesha!
I-SubPals iyinkundla yamahhala yokukhulisa ababhalisile be-YouTube eklanyelwe ukuqalisa isiteshi sakho ngokuxhumana nabantu bangempela! Qala uhambo lwakho lokukhula manje.
Thola Ababhalisile be-YouTube bamahhala
Izici ezibalulekile Zensiza Yethu Yababhalisile ye-YouTube
Ama-SubPals anikela ngenethiwekhi entsha evumela ukuthi wena uthole ababhalisile be-YouTube abasha nabamahhala abayi-10 njalo emahoreni ayi-12! Le nkonzo ayikhokhelwa futhi ifaka ezinye izinketho ezingabizi kakhulu ezikhokhwa kakhulu kulabo abafuna ababhalisile nsuku zonke.
Ama-SubPals aklanyelwe ukuba alula njengoba umuntu engenzeka! Isikhathi sakho sibalulekile futhi siyakuqonda lokho, ngakho-ke, sithuthukise inethiwekhi ukukunikeza ababhalisile be-10 be-YouTube mahhala imizuzu embalwa yesikhathi sakho.
Inethiwekhi yethu yamahhala inikezela ngokushintshana phakathi kwakho namanye ama-YouTubers abheke ukukhulisa ababhalisile, ngakho-ke uzokwamukela ukubhaliswa kwabanye abanikazi besiteshi se-YouTube. Kuyindlela ephumelelayo yokuthola ababhalisile abaningi be-YouTube!
Kusetshenziswa ama-SubPals ukuthola ababhalisile be-YouTube mahhala i-100% iphephile ku-akhawunti yakho ye-YouTube. Ungazizwa unethemba lokuthi inethiwekhi yethu iphephile ukuyisebenzisa futhi iphephile ngaso sonke isikhathi.
Uma wenza uhlelo lwesiteshi sakho samahhala noma olukhokhelwayo, uzobona ukubala kwesiteshi sakho kuqala ukukhula ngalolo suku! Lonke icebo liqala ukusebenza ngokushesha ukukhulisa ukuthembeka nokuvezwa kwesiteshi sakho.
Iqembu lethu elinobungani lilapha ukuzosiza! Uma unemibuzo noma udinga usizo nganoma yini, siyi-imeyili nje. Uma usithinta, ungalindela impendulo ngesikhathi esifanele.
Izinyathelo ezilula Zokuthola Ababhalisile Abamahhala
Yenza uhlelo lusebenze
Ama-60 Seconds Kamuva, Usuqedile!
Hlala emuva bese Thola Ababhalisile Bakho Mahhala
Ngifuna Ababhalisile Abakhululekile Manje
I-10 Yenzuzo Ebaluleke Kakhulu Ababhalisile be-YouTube bamahhala
Izinto ezinhle kakhulu empilweni zikhululekile; nangokukhuphuka kwemidiya yokuxhumana nomphakathi, yini engcono kunababhalisile be-YouTube bamahhala? Kulungile, mhlawumbe ungabiza okungenani izinto ezimbalwa ezingcono; kodwa iqiniso ukuthi, ukulandela kwakho kumasayithi wokuxhumana nabantu, njenge-YouTube, sekubaluleke kakhulu emhlabeni wanamuhla.
“I-YouTube inokuqukethwe okuhle kakhulu. Futhi inokuthile kuwo wonke umuntu. Futhi abantu beza kimi ngaso sonke isikhathi futhi bakhulume nami ngokuthi i-YouTube iyishintshe kanjani impilo yabo, ukuthi bakwazi kanjani ukufunda okuthile ababengacabangi ukuthi bangafunda. ”
Amabhiliyoni amahlanu. Lelo linani lamavidiyo we-YouTube abiwe kusayithi kuze kube manje. Kusukela yasungulwa ngoFebhuwari 14, 2005, ipulatifomu yokwabelana ngamavidiyo ithandwayo iqhubekile nokuheha abasebenzisi abasha abenza okuqukethwe ngejubane elihlaba umxhwele. Ukuthandana komhlaba ne-YouTube akukhona ukuthi yadalwa ngoSuku Lwezithandani, noma kunjalo. Kulula ukuqonda ukuthi kungani kube ithuluzi elibaluleke kangaka kubasebenzisi ukuze bahlale bexhumekile futhi bahlale benolwazi.
Eqinisweni, ngokusho kwesikhungo sokucwaninga i-Pew, ngaphezu kwe-20% yabasebenzisi abadala baveze ukuthi basebenzisa i-YouTube njengomthombo ojwayelekile wezindaba. Lokho kwenza i-YouTube ibe yisayithi lesibili elisetshenziswa kakhulu kwezindaba zemithombo yezindaba, ngemuva kwe-Facebook, lapho i-43% yabasebenzisi abadala bethi ithola izindaba zabo. Ngaphezu kwalokho, ngokusho kuka-Omnicore, ama-75% ezinkulungwane ancamela ukubukela amavidiyo e-YouTube abukele umabonakude wendabuko.
Yini, lapho abantu bezithola khona izindaba zabo, ezihlobene nabalandeli be-YouTube bamahhala? Kuhle, kuwumqondo omuhle ukuliqonda ngokuphelele ithonya i-YouTube enalo emasikweni ethu, nokuthi amasiko ethu aluthola kanjani ulwazi. Ngalo lwazi, uzokwazi ukufinyelela izithameli zakho ngempumelelo.
Izibalo zikhomba ukuthi abantu abaningi kakhulu baphendukela kumasayithi afana ne-YouTube ukufunda ngalokho okwenzeka emhlabeni, kepha akupheli lapho. Abasebenzisi be-YouTube bafunda zonke izinhlobo zezingcezu zolwazi kuyo yonke into kusuka ekutheni ungafaka kanjani ukulungiswa kokukhanya, indlela yokwenza-ukwakheka. Kepha manje, kunanini ngaphambili, abasebenzisi babukela amavidiyo e-YouTube ukuze afunde ngamabhizinisi nangemikhiqizo.
Yindawo ephelele yokukhuthaza inkampani yakho. Ukuxoxa izindaba ngevidiyo kunikeza leyo nhlanganisela efanelekile yolwazi nokuzijabulisa, namavidiyo aletha imininingwane eminingi kunani lesikhathi esifushane. Nge-YouTube, uthola ukukhombisa ababukeli bakho ukubukeka okukhethekile kusiko lenkampani yakho bese wabelana ngemininingwane ababengeke bavame ukuyithola kwisikhangiso sokuphrinta noma esidijithali.
Ngenkathi i-YouTube ikulungele ukuxhumana namakhasimende akhona futhi angaba khona, udinga ukulungiselela umncintiswano. Mayelana 63% namabhizinisi kakade afakwe-YouTube e amasu abo ukumaketha, nokuthi nombolo kuphela zona ziyanda.
Imininingwane eminingi kangaka ifakwa esakhiweni ngasikhathi sinye, cishe akunakwenzeka ukuvezwa. Cishe 300 amahora vidiyo alayishiwe njalo ngeminithi. Uma wenza kanjalo izibalo, lokho ngaphezu kumahora angu-400,000 ngosuku, futhi abacishe 158,000,000 iri ngonyaka. Ubungeke ube ukuchitha iminyaka 18,000 ukubukela amavidiyo we-YouTube ku-akhawunti i-2018 kuphela. Thola isithombe?
Uyabona lapho esiya nalokhu; funda ngezizathu eziyisishiyagalombili ezibaluleke kakhulu zokuthola ababhalisile bamahhala ku-YouTube.
Yakha okulandelayo okukhulu
Isizathu sokuqala sokuthola ababhalisile mahhala sisho ngqo — ufuna ukwakha isiteshi esikhulu ngokulandelayo! Ukuthi ungumsebenzisi omusha, noma mhlawumbe usunaso isiteshi se-YouTube kodwa unenkinga yokuthola ukuthambeka, abanye ababhalisile abengeziwe bangahamba ibanga elide ukuthuthukisa ukuzibandakanya okuqinile nokulandela ngokuqinile.
I-algorithm ye-YouTube ithanda iziteshi ezinababhalisile abaningi ngokubonisa okuqukethwe kwabo kubabukeli abaningi. Lokhu kudala umphumela webhola leqhwa ngoba abantu abaningi ababona isiteshi sakho, kungenzeka kakhulu ukuthi basibhalise futhi.
Ufuna ukunakwa kwamanye amasayithi wokuxhumana nabantu
Iningi lezingosi zokuxhumana nabantu laphaya lingaxhunyaniswa ndawonye ngomsebenzisi ngamunye. Lokhu kwenza kube lula ukwabelana ngokuqukethwe kuwo wonke amapulatifomu, futhi kukhuphula usayizi wababukeli bakho. Uma ividiyo idumile ku-YouTube, kunethuba eliphezulu kakhulu lokuthi ababhalisile bazothumela ividiyo kwamanye ama-akhawunti abo ezinkundla zokuxhumana. Ababhalisile abaningi be-YouTube basho abantu abaningi abangasiza ukusiza ukusabalalisa amavidiyo akho kwamanye amapulatifomu. Kungekudala, ividiyo ibonakala yonke indawo, futhi umi nethuba lokuthola igciwane.
Yiphupho lakho lonke i-YouTuber. Yiba negciwane, wenze okuqukethwe kwakho kubonwe yizigidi, bese ungena emlandweni we-YouTube ngamavidiyo ayizithonjana esikhathi sethu afana ne- "Charlie Bit My Finger" ne- "Harlem Shake." Kungabonakala “njengemizuzu engu-15 nje kuphela yodumo,” kepha empeleni, abathengi abaningi babheka imikhiqizo futhi bathathe izinqumo zokuthenga ngemuva kokufunda ngayo ezinkundleni zokuxhumana.
Kwesinye isikhathi kuba yimfihlakalo ukuthi kungani izinto ezithile ziba negciwane, kodwa ngokuvamile, amavidiyo ekhwalithi ephezulu anokuqukethwe okubulalayo avame ukuqashelwa. Kodwa, noma ngabe amavidiyo akho ahlanganiswe ngobuciko kangakanani, uma ungenalo isibalo esihle sababhalisile, kuyangabazeka ukuthi kukhona ozowabona amavidiyo akho. Ukuthola abalandeli abaningi kusho ukuthi isiteshi sakho se-YouTube sizovela “kokuqukethwe okuphakanyisiwe” okwengeziwe kwabasebenzisi be-YouTube. Lowo mphumela we-snowball uyaqala, futhi ngaphambi kokuthi wazi amavidiyo omkhiqizo wakho abiwa emhlabeni wonke yizigidi zabantu. Ukuthola ababhalisile be-YouTube bamahhala kuyisinyathelo sokuqala nje. Uma unquma ukuthenga ababhalisile be-YouTube, qiniseka ukuthi ubathenga enkampanini enedumela elihle esisebenze okungenani iminyaka embalwa futhi enedumela lokuletha ikhwalithi ephezulu, izinsizakalo ezithembekile.
Phinda uthole amavidiyo ambalwa angathandeki
Imithombo yezokuxhumana yinhle ngoba inika izwi cishe kuwo wonke umuntu emhlabeni. Noma ngubani angabelana ngombono wakhe ngokuthinta inkinobho. Kepha okuhle, futhi kuza nokubi, futhi abasebenzisi banekhono elikhudlwana lemikhiqizo yomlomo omubi nomhlaba wonke njengezilaleli zabo. Uma uthole amanye amazwana amabi alimaze amazinga akho wevidiyo, ukwandisa isibalo sakho sababhalisile kuzosiza ekulweni nalokhu.
Kubizwa ngokuthi yi-social proof, futhi yindlela abantu abafunda ngayo ukuthi benzeni nokuthi yini abangayenzi. Abantu bathambekele kakhulu ekuthandeni into abacabanga ukuthi nayo abanye abantu bayayithanda. Okuhlukile kuyiqiniso futhi; umuntu uzokwahlulela okuthile njengokubi noma okungathandeki uma bebona abanye abantu bekuphika nakho. Ababhalisile be-YouTube banjengevoti ezikuthandayo, cabanga ngazo njengezibuyekezo ezinhle. Noma ngabe isiteshi sakho sinamavidiyo ambalwa angathandwa kepha sinenombolo enkulu yababhalisile, abanye abasebenzisi bazokucabanga ukuthi umkhiqizo wakho uyathandwa, futhi kungenzeka bathethelele ukungathandwa okuthile lapha nalaphaya.
Khulisa ubuqiniso bohlobo lwakho
Iziteshi ze-YouTube ezinababhalisile abambalwa kuphela ezibukeka zintsha sha. Amabhizinisi amasha asaheha abathengi ngoba wonke umuntu ufuna ukuba owokuqala ukuthola indawo entsha ethi “it”. Kepha, ngemuva kokuqedwa kothuli uma ungakakhanga uhlu lwababhalisile olukhulu, abantu bazocabanga ukuthi kukhona okungalungile ngomkhiqizo wakho. Uma uthola abalandeli be-YouTube bamahhala, uhlobo lwakho lomkhiqizo lubukeka lungelide ngokwanele ukuze lizenzele igama elihle. Lokhu kuzokwakha ukwethembana namakhasimende akho futhi kwandise namathuba akho okuthengisa imikhiqizo eminingi ngebhizinisi lakho.
I-YouTube yakho elandelayo idinga ukunakekelwa
Njenganoma obuphi ubuhlobo, ukwakha imithombo yezokuxhumana enempilo elandelayo ukuzibophezela okukhulu. Imvamisa, amabhizinisi azoba nabasebenzi abazinikele abaphatha ama-akhawunti abo ezinkundla zokuxhumana. Kepha laba bantu abasebenzisi mahhala. Amabhizinisi agcina esebenzisa imali eyizinkulungwane ukuze akhokhele imiholo nemihlomulo yaminyaka yonke, kanti nezinkampani ezintsha ezinamamashi amancanyana wemisebe ngokuvamile azikwazi ukuqhubeka.
Ukugcina ubukhona bemidiya yezenhlalo kuwumsebenzi wesikhathi esigcwele ngoba akwanele ukuthumela amavidiyo ku-YouTube uma nje ufuna ukubonwa. Kudinga isikhathi namandla ukuze uthumele ngenkuthalo, wabelane, futhi ubeke amazwana, njengokubuka, kanye nokuzibandakanya nezithameli zakho, kucishe kube sengathi ibhizinisi lakho lingelomuntu uqobo. Kepha ukuxhumeka komuntu siqu okwenza i-YouTube ithuluzi elibaluleke kangaka! Akungabazeki ukuthi ibhizinisi lakho lidinga ukuba kwi-YouTube; kumane nje kuyindaba yokuthi uzosisingatha kanjani isibopho.
Ungathatha iphrojekthi enkulu uqobo, kepha futhi unezinye izidingo zebhizinisi eziningi ezidinga ukunakwa kwakho. Ukuthola ababhalisile be-YouTube bamahhala kuthatha umthwalo wokwakha ubukhona bakho be-YouTube kusuka ekuqaleni kwamahlombe akho. Ungaphumula kalula wazi ukuthi abalandeli bakho bayanakekelwa futhi babuye ekubhekeni ezinhlwini ezibucayi zebhizinisi.
Kubukeka kuphezulu kusesho
Sesivele sikhuluma ngendlela iziteshi ze-algorithm ezithanda ngayo izikhala zababhalisile abaningi ngokukuveza kumlaleli obanzi. Ingxenye yalokhu iphathelene nokuthi lezi ziteshi zibeka nini oseshweni. Kufana nalokhu, ake sithi ungumnikazi yokudlela owaziwa ngokupheka ama-veggies asanda kuthathwa. Uma isiteshi sebhizinisi lakho le-YouTube sinababhalisile abambalwa kunezipuni ezinamafutha ezansi block, amavidiyo abo azovela aphezulu kusesho kunokwakho, noma ngabe isaladi yakho yasebusika ingaguqula okukhaliphile kwe-carnivores. Ngakho-ke, akunandaba ukuthi okuqukethwe kwakho kukuhle kangakanani, ngenombolo ephansi yababhalisile uthola ingozi yokuphelelwa yibhizinisi elincane.
Usebenze kanzima ngebhizinisi lakho, futhi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyanakwa. Ukuthola ababhalisile be-YouTube kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi uhlobo lwakho lomkhiqizo luvela phezulu ohlwini ekuseshweni, nokuthi okuqukethwe kwakho kuphakamisa umncintiswano.
Kuyinkohliso edumile esetshenziswa izinkulungwane zama-akhawunti
I-YouTube iyithuluzi elibaluleke kangaka labakhangisi. Ukuthola ababhalisile besiteshi kufana nokuthi abantu babhalisele ukubheka imikhiqizo yakho nsuku zonke. Akukhona ukuthi i-YouTube iyingxenye ebalulekile yanoma yiliphi isu lokumaketha kepha ukuthola ababhalisile be-YouTube bamahhala kungenye yezimfihlo ezigcinwe kahle embonini. Ungamangala ngenani lama-akhawunti laphaya ngababhalisile abanga-organic kanye nabalandeli. Amamodeli, abashayeli bezinhlanga, ngisho nabezepolitiki, bonke bazitholele ababhalisile be-YouTube kuma-akhawunti abo futhi babukele ukuthandwa kwesiteshi sabo kukhuphuka phambi kwamehlo abo.
Iningi lethu lithole isikweletu se-Ad mahhala kusuka ku-Facebook. Yinto efanayo. Cabanga ukuthola abalandeli njengokuqinisa iposi ku-Facebook, zombili izindlela ezingasebenziseka zokwandisa ababhalisile bakho. Umehluko kuphela ukuthi, ukukhulisa okuthunyelwe ku-Facebook nakwamanye amasayithi kuyingozi ngoba awuqinisekisiwe inombolo ethile yabalandeli noma ukuzibandakanya okuvamile.
Khulisa imali yebhizinisi
Njenganoma iliphi ibhizinisi, ufuna ukukhulisa umugqa wakho ongezansi. I-YouTube iyipulatifomu enhle yokuguqula abathengi abangahle babe ngamakhasimende ngempilo yonke ngokwabelana ngamavidiyo ahlanganayo ngomkhiqizo wakho. Konke kuholela kulokhu. Ngababhalisile be-YouTube bamahhala, ungakhela okulandelayo okuningana kwebhizinisi lakho. Ukusuka lapho, amavidiyo akho angasakazeka aye kwamanye amasayithi afana ne-Facebook, futhi uthola ithuba lokuthola igciwane; futhi kuveze umkhiqizo wakho ezigidini zabathengi. Siphinde sabheka nezinye izinzuzo, kepha okusho ukuthi yisiphi isizathu sokuthi ukwandisa isibalo sakho sababhalisile be-YouTube kuzoholela ekwandeni kwemali engenayo yebhizinisi.
Sawubona … Kumahhala!
Kungenzeka isihloko lesi sihloko kwangenza ngaba nesithakazelo sakho. Ababhalisile be-YouTube bamahhala bayinto etholakalayo, kepha kunezinkampani ezihlinzeka ababhalisile! Lezi akuzona nje kuphela i-bots ezigaxekile i-akhawunti yakho; siphelela abasebenzisi yangempela ukuthi usizo organically ukwandisa zokubhalisa count yakho bese ibhizinisi lakho ngaphandle.
Ngakho lokhu kusho ukuthini ibhizinisi lakho?
Okushiwo nguSusan Wojcicki ngokungangabazeki kuyiqiniso; I-YouTube inokuthile kwawo wonke umuntu. Njengebhizinisi ku-YouTube, noma kunjalo, akwanele ukuba okuthile othile , kufanele ulwele ukuba yinto ethile wonke umuntu . Njengoba kungazwakala nje, i-YouTube idume kakhulu kunethelevishini yenethiwekhi, kanye nentambo. Abasebenzisi baziva ukuxhumana okuhlukile neplatifomu neziteshi abazilandelayo ngenxa yokubukeka okusondele okubanika "izimpilo" zosuku nosuku zemikhiqizo. Ukuthola ababhalisile be-YouTube bamahhala kuyindlela engcono kakhulu yokugxuma ubukhona bakho be-YouTube futhi uvule umnyango wempumelelo yebhizinisi.
Thola ababhalisile bakho be-YouTube BAMAHHALA ngokushesha bese uqala uhambo lwakho lodumo lwe-YouTube namuhla!
Okuthunyelwe okusha kwebhulogi
Amathiphu okudala amavidiyo anomsila omude anomthelela ku-YouTube
Impela, Okufushane kwe-YouTube kukhula amagagasi ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa bewazi ukuthi abantu abaningi bacishe babuke amavidiyo anomsila omude kuphela? Lawa amavidiyo amade e-YouTube,...
Umhlahlandlela wakho Wokuqalisa Isiteshi se-YouTube sebhizinisi
Isiteshi se-YouTube esiyinkampani empeleni siyisiteshi se-YouTube sebhizinisi. Nakuba i-YouTube ingahlukanisi phakathi kwesiteshi ngasinye nesezinkampani, kunezinto ezimbalwa ongazenza...
I-30th Meyi 2022
Mangaki Omaki Okufanele Uwasebenzise Ukuze Ubonakale Kangcono Ku-YouTube?
I-YouTube ayiseyona nje inkundla yokusakaza amavidiyo - isiphinde yaba injini yokusesha. Eqinisweni, inkundla ephethwe yi-Google ingeyesibili kuphela ku-Google ngokosesho...
Lapha kwa-SubPals, siyaziqhenya ngesevisi eyingqayizivele nezintengo ezithengekayo. Ungagcini nje ngokuthatha izwi lethu ngakho - hlola ukubuyekezwa kwamakhasimende ethu ngezansi.
Thumela isibuyekezo sakho
Ngingumdali wokuqukethwe, kusizile ngempela ngoba i-Subpals yengeze ababhalisile esiteshini sami njalo ngemva kwamahora angu-12.
Le webhusayithi inhle ekukhuleni kwama-youtubers adinga ugqozi. Ngiqale ngababhalisile abangama-80 futhi manje senginabangu-500.
- Ayida a.
Bengifuna amathiphu amancane okuthola ababhalisile besiteshi sami se-YouTube ku-inthanethi ngenkathi ngithola ama-SubPals futhi ngangihleba kancane, ngicabanga ukuthi kuzoba umkhonyovu. Ngenhlanhla kwakungenjalo futhi ngakwazi ukuzuza ababhalisile abayishumi abahle emizuzwini embalwa! Ngincoma kakhulu, ngaphezu kwalokho ungasebenzisa izinsiza zabo mahhala kanye ngosuku;)
- UMnu Pigma P.
Iwebhusayithi enhle, uthola ababhalisile bamahhala. Futhi ayinawo amagciwane. Kuhle kakhulu. Bheka le webhusayithi. MANJE!
Isevisi enhle kakhulu ngentengo enhle kakhulu, thanda imodeli esekelwe ekubhaliseni. Ukubuka kanye nababhalisile kungokwemvelo.
- U-Alex H.
Kuthatha cishe isigamu sehora ukuthola ukufinyelela kuhlelo lwamahhala, olukunikeza inani eliphansi lama-subs angu-10 njalo ngo-12h, nakuba udinga ukulenza lisebenze mathupha. Iwusizo kubantu abasha abafisa ukukhulisa isiteshi sabo se-yt. Isayithi kulula ukuyisebenzisa.
Kuwo wonke amawebhusayithi angaphansi kwe-Youtube akhona, ama-Subpals kufanele abe ahamba phambili, njalo emahoreni ayi-12 ungagaya ababhalisile abayi-10 okulungile, uqinisekile ukuthi abanye abantu bazozikhipha ohlwini okuyinto ngeshwa into amawebhusayithi afana nalawa angakwazi ukuyivimba. , ngike ngasebenzisa abangani abancane esikhathini esidlule futhi ngokokuhlangenwe nakho kwami, kuyindlela engcono kakhulu yokuzuza ababhalisile be-YouTube.
Kuyamangaza ukuthola ababhalisile abaningi nokuthandwa akukholwa ukuthi leli sayithi lingokoqobo kodwa lisebenza kahle kakhulu.
- U-Adam S.
Okuhamba phambili okuhle kakhulu, kunconyelwe wonke umuntu. Sebenzisa izinsiza zabo, ezimangalisayo ngempela. Ngithola ababhalisile esiteshini sami njalo..
Indlela engcono kakhulu yokuthola ababhalisile ku-youtube ithathe isikhathi kodwa iwusizo futhi iyasebenza ngakho ngiyayincoma!
- U-Aurimas K.
Ababhalisile bangempela esibazuza ku-subpals.com. Ngizoncoma ukuthi usebenze ku-subpals.com ukuze uthole ukunyuswa kwesiteshi se-YouTube. Ngiyabonga
isevisi enhle. Uhlelo lwamahhala luyasebenza
Isevisi enhle kakhulu esiza isiteshi sami ukuthi sikhule. Kuningi okunikezwayo kwamasonto onke okumangalisa ngempela.
Isiteshi sami se-youtube i-JE Imposters sizuze ababhalisile abaningi kakhulu kwa-SubPals! Ngithumele iviki elilodwa kuphela futhi senginababhalisile abangu-30! Njengoba lokho kuyamangalisa le sayithi isebenza ngempela futhi ngincoma kakhulu
Kuhle kakhulu, ngijabule kakhulu ukuthi yenze lokhu ebikukhuthaza! Bakunikeza ababhalisile emizuzwini embalwa futhi babonakala bethembekile
isiteji esihle ngokukhethekile sabaqalayo!
- IJumanji 71
Ngiyithanda kakhulu le webhusayithi. Ungathola ababhalisile bamahhala ngokuthanda nokubhalisa abanye abantu.
- Mateusz L.
Lokhu kuphephe kakhulu ukusebenzisa njengoba sekuphele amasonto amabili ngiyisebenzisa ngaphandle kwezinkinga. ngakho-ke ngicabanga ukuthi abantu abazama ukukhula ngokushesha kufanele bahambe basebenzise lesi sizindalwazi
Kuhle kakhulu, kunconyiwe okungu-100%, kusebenza kahle, uma ufuna ukukhula, le yiwebhusayithi yakho. Ngincoma ku-youtube
- UMose R.
Iwebhusayithi engcono kakhulu! Ngingazama futhi! Njengokuthi uma udinga usizo ngesiteshi sakho, lokhu kuzokusiza ngokuphelele!
Ngizizwa ngijabule kakhulu ngemva kokujoyina le webhusayithi. Futhi ngincome kanjalo kini nonke ukuthi nijoyine lapha.
Lolu uhlelo lokusebenza olumangalisayo, lukunikeza ababhalisile bamahhala! Impela ngingabancoma ngoba lokhu kubhalisa kungaba wusizo kakhulu.
Kuhle kakhulu! Uthola cishe ababhalisile abangu-15 njalo futhi ulahlekelwa cishe kwabangu-3 kuphela. Ngisuke ku-9 ngaya kwabangaphezudlwana kwabangu-30 ezinsukwini ezingu-2!
Khulisa isiteshi sakho kalula ngokubhalisela nje abantu! Ngincoma kakhulu ukuthi uzame lokhu! Ngeke uzisole futhi le sayithi inesevisi enhle kakhulu. Uma uthenga noma yikuphi ukubhalisa lapha njengebhizinisi noma enye into, uzoduma ngesikhathi esifushane...
Sinikeza Izinsizakalo Zokuthengisa Eziningi ze-YouTube
Izinketho zokuthenga ngesikhathi esisodwa ngaphandle kokubhaliselwa noma ukukhokha okuphindaphindiwe
Ukuhlolwa kwesiteshi se-YouTube
Ividiyo ye-YouTube ye-YouTube
I-YouTube Graphic Design
Izikhungo Ukuhlolwa kwesiteshi se-YouTube ($ 120)
Ukuhlolwa kwevidiyo okujulile okurekhodiwe kwesiteshi sakho se-YouTube + kuhlaziya izimbangi zakho + nohlelo lwezinyathelo ezi-5 zezinyathelo zakho ezilandelayo.
Ukuhlolwa kwesiteshi okugcwele
Amathiphu aqondene ngqo nesiteshi sakho namavidiyo
Buyekeza Amavidiyo Akho Namasu Wokuqukethwe
Izimfihlo Zokukhuthaza Amavidiyo Nokuthola Okubhaliselwe
Hlaziya izimbangi zakho
Uhlelo Olunezinyathelo Ezi-5 Lokwenzela Wena
Isikhathi sokulethwa: izinsuku ezingama-4 kuye kwangama-7
Izikhungo 1 I-YouTube Video SEO ($ 30) Amavidiyo we-YouTube we-3 SEO ($ 80) Amavidiyo we-YouTube we-6 SEO ($ 150) Amavidiyo we-YouTube we-12 SEO ($ 280)
Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini Engeza ekalishini
Ukuhlolwa okugcwele kwevidiyo yakho ye-YouTube, kusivumela ukuba sikunikeze isihloko esithuthukisiwe + Incazelo + 5 Amagama angukhiye / amaHashtag.
Ukuhlolwa kwevidiyo okugcwele kwe-SEO
Kunikezwe Isihloko Esithuthukisiwe
1 Kunikezwe incazelo
Amagama angukhiye acwaningiwe / amaHashtag
Izikhungo Idizayini engu-1 yesibhengezo sesiteshi ($ 80) Idizayini Yesithonjana sevidiyo engu-1 ($ 25) Idizayini Yesithonjana sevidiyo engu-3 ($ 70) Idizayini Yesithonjana sevidiyo engu-6 ($ 130)
Ingcweti yesiteshi se-YouTube esenziwe kabusha isithasiselo esisebenza ngokugcwele, kanye namaThumbnails Video YouTube.
Ikhwalithi Yokwakha Ochwepheshe
Ngokwezifiso Ukufanisa Brand Yakho
Idizayini Enamandla Nokuzibandakanya
Usayizi nekhwalithi efanele ye-YouTube
Kuthuthukisa i-Click-Thru-Rate (CTR yakho) yokuchofoza
Isikhathi sokulethwa: izinsuku ezingama-1 kuye kwangama-4
Joyina ngaphezu kwesigidi se-YouTubers abakhuthaza ngentshiseko isiteshi sabo nababhalisile be-YouTube bamahhala!
Thola umkhawulo wakho wokuncintisana nababhalisile be-YouTube bamahhala usebenzisa i-SubPals's shipping network!
I-USA NE-CAN: 888-881-9070
... nokuningi okuningi!
Copyright © 2022 SubPals (subpals.com). Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe
Izifundo Zokuqeqeshwa Zevidiyo
Isivumelwano Sezinhlelo Zokusebenzisana
Okuthunyelwe kwamabhulogi wakamuva
Ubasingatha kanjani abaphawula ngogaxekile Ku-akhawunti yakho ye-YouTube?
Izimangalo ze-copyright ze-YouTube ngokumelene nezimangalo ze-YouTube
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola isipiliyoni esihle kakhulu.